Fampodiana ireo vahiny Hisy zotra Air France ho avy indray ?
Eo am-pandinihana ny hisian’ny sidin’ny Air France haka ireo Frantsay sy Eorpeanina hafa tavela eto hampifandray an’Ivato sy Roissy,
ka ny 24 aprily izao no heritreretina hanaovana izany, izay efa fampodiana fanintelony na fahaefatra io raha raikitra.Ireo Frantsay sy Eoropeanina tavela eto izay manana “visas à court séjour) izany hoe ireo fotoana fohy ihany no hahafahany mijanona eto no tafiditra ao anatin'io, ireo Frantsay na Eoropeanina hafa tafiditra ao anaty mason-tsivana fanasokajian’ny Filankevitra ambony momba ny fahasalamam-bahoaka ho marefo (70 taona miakatra, misy aretina mitaiza, olana ara-pisefoana, olana amin’ny fo, voa, diabetika,…). Ny masoivoho Frantsay no hakana ny andinindininy mahakasika an’io ary misy ny laharana 0202229844 hahafahana maka fanazavana. Ny masoivoho Frantsay no antsoin’ny Air France amin’ny lisitr’izay mpandeha, raha raikitra tokoa io. Raha halalinina, dia mbola tsy manana antoka ny hahatafavoahana na ny hahafehezana ny coronavirus eto Madagasikara ny Frantsay, ka aleony mampody ny terataniny na an’arivony isan’andro aza ny maty any aminy. Tsy mahatoky ny drafitra ara-pahasalamana eto, ary mety mihevitra fa mbola ho lava ity tantara ity ka aleo aloha ampodiana ny olona.